Getaways dzeZuva raValentine | Kufamba Nhau
Carmen Guillen | | Getaways, Kudanana
Ini ndinotenda kuti handisini ndoga ndiri kubvunza nhasi chinhu chimwe chete icho chatakabvunza mumusoro wenyaya ino: Ndeupi rudzi rwekupukunyuka kusarudza Zuva reValentine? Uye chokwadi ndechekuti pane mikana yakawanda kwazvo, mutsauko wesarudzo, mitengo uye mawebhusaiti anopa "zvinopa muto", izvo zvatinopokana kupfuura zvatinofanira.
Nhasi ndiri kuzokupa sarudzo yesarudzo dzeZuva raValentine dzandiri kufunga uye ndinovimba dzichakushandira futi kuti ugonyatso kujekeserwa nezvesarudzo yekupedzisira kusarudza.
1 Ndege + hotera?
2 Hotera kana yega-hotera?
2.1 Zvakanakira kusarudza hotera
2.2 Zvakanakira kusarudza yakasarudzika-hotera
3 Uye zvakadii nezvekuenda kumaruwa?
4 Matipi ekutanga usati watanga kupera kwevhiki
Ndege + hotera?
Kana tichida kushamisa mumwe wedu, muudze izvozvo nezve: "Mudiwa, rongedza mabag ako kwemazuva maviri tave kuenda asi usabvunze kuti ...", ndiyo inonyanya kudanana uye yakanaka. Uye kana pamusoro peizvozvo isu tichiwedzera kwekuenda uko zvirinani kusarudza nendege kwete nemotokari, ingadai iri bhomba.
Chii nzvimbo Ndinogona kufunga nezvazvo?
Asi chii chatinofanira kufunga nezvacho kana tikasarudza iyi sarudzo?
Kazhinji idzi mhando dzekutora kazhinji dzinodhura, sezvo ndege yacho ichifanira kuwedzerwa pekugara muhotera
Pane dzikamisa nguva dzendege chaizvo kuti zviwirirane nekuwanika kwedu, zvese pakubuda uye munzira yekudzoka, uye panguva imwechete tsvaga yakanyanya mari sarudzo kuti tirege kurasikirwa nemutengo wakawandisa.
Kana iwe uchikwanisa parizvino kushandisa zvishoma pane aya marudzi e "kushamisika", ichi hapana mubvunzo chimwe cheakanakisa sarudzo. PaInternet uchawana mapeji asingaverengeke kwavanogadzirisa nyaya yendege nehotera. Zvakare, kune aya marudzi emadheti sarudzo dzekugara dzinowanzo kuuya nadzo mashoko ekugamuchira seyakajairika machokoreti uye champagne, mabiko emangwanani akasanganisirwa, kukwiza muviri kana sauna yeawa imwe, nezvimwe.
Hotera kana yega-hotera?
Kana isu tikazoona kuti purogiramu yedu haigone kuchinjika kune yendege nyaya (hatifanire kukanganwa kuti mazuva maviri chete) uye tinosarudza "Mugwagwa negumbeze"Imwe yesarudzo dzatinooneswa, idzo dzandinonyungudutsa zvakanyanya, ndeyekusarudza hotera kana imba yekugara-hotera.
Zvakanakira kusarudza hotera
Ungofanire kunetseka nezvazvo zorora, zorora uye ugare zvakanaka achiperekedzwa nemumwe wako.
Ivo vanowanzo kuwanikwa madhiri akanaka nehafu bhodhi inosanganisirwa.
Mune ruzhinji mahotera iwe unogona kuve neyako kupaka nzvimbo yakachengetedzwa (kana iwe ukaikumbira).
Zvakanakira kusarudza yakasarudzika-hotera
Kugara kweimwe-hotera iri yakakura (kazhinji) kupfuura imba yehotera. Iwe une kicheni chako chidiki uye yako diki yekutandarira inosanganisirwa.
Iwe hauna kuganhurirwa kumaawa akasarudzika ehotera pakudya kwekuseni, masikati, kudya kwemanheru ... Kana iwe uchida kuva ne "yekuponesa" kutiza, iwe unogona kugara uchitenga chimwe chinhu musupamaketi uye wochibikira mufurati chaimo.
Naizvozvo, kana iwe uchijekesa nezvenzvimbo yekuenda nemumwe wako, ikozvino unogona kunyatso kujoja nezve izvo zvaunoda uye nemabatiro aunoda kunakidzwa neavo makumi mana emaawa ekuzorora nerudo.
Uye zvakadii nezvekuenda kumaruwa?
Kune avo vedu vanobva kuguta, vachimhanyisa kwese kwese, vachifema "zvishoma" mhepo yakachena, vasingaone nzvimbo dzakasvibira, zano re kutiza kwekumaruwa kunonakidza kwazvo, kunyanya ikozvino munguva yechando. Pfungwa yekugara munzvimbo ine choto, kwaunobuda uye unowana zvimwe zvipuka nemiti kupfuura vanhu, nezvimwe. kunyanya inokwezva kutarisisa.
Mikana mizhinji inouya kwandiri nerudzi urwu rwekutiza:
Ita zvimwe kukwira nzira.
Kushanyira misha midiki kubva kumativi.
Tora imba yakarasika mutaundi diki pamwe nevamwe vaviri veshamwari uye ingo fara uye bvisa kubva kune zvese kwemazuva mashoma.
Hazvifadzi here? Kwandiri ndeimwe yeanokunda mazano ezverudzi urwu rwekutiza.
Matipi ekutanga usati watanga kupera kwevhiki
Chero chaunosarudza, tiri kuzokupa akateedzana e consejos kutora hanya usati waenda kwawakasarudza kuenda uye pekugara:
Kana ukaenda nemotokari, tarisa mavhiri, mafuta, mwenje, nezvimwe.
Kana iwe uchityaira kunzvimbo ine chando, usakanganwa ku pfeka ngetani (zvingangoitika).
Kana iwe uchienda nemotokari kunzvimbo yausina kumbobvira wakamboita, tinokurudzira kuti sei browsers mafoni ekushandisa "Waze" o Sygic. Iwo akanaka chaizvo uye ane akagadziridzwa mepu.
Tsvaga pamberi pezve Climate iyo iwe yaunowana kwauri kuenda, kunyangwe kana iwe ukapedzisira wafunga kusasiya peninsula. Iwe uchaziva kuti pano mamiriro ekunze kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe anosiyana nekungodarika mazana maviri emakiromita.
Usatakure mabhegi mahombe. Uri kungoenda kwemazuva mashoma. Ichando, saka pfeka mbatya dzinodziya uye kunyanya dzakanaka. Kunyangwe uri Zuva raValentine, iwe ungangoda kupfeka jasi shoma uye mbatya zvakanyanya zvinoenderana nezuva racho, tinozvisiira izvo kune yako sarudzo.
Kana iwe ukaenda nendege, yeuka kuti iwe unofanirwa kunge uine rinenge awa imwe nguva isati yasimuka.
Chero ipi sarudzo yaunosarudza, tinokushuvira iwe kufara kwevhiki yekudanana. Dai zvese zvikaenda zvakanaka!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Getaways » Kudanana » Getaways dzeZuva raValentine